🥇 ▷ Mashiinnada fudud ee Tinybop, ciyaarta waxbarasho ee loogu talagalay iPhone iyo iPad ✅
Mashiinnada fudud ee Tinybop, ciyaarta waxbarasho ee loogu talagalay iPhone iyo iPad
Mashiinnada fudud ee ciyaarta injineerinka ciyaarta ee carruurta iyo dadka waaweyn
Waxaa laga heli karaa App Store, dukaanka app ee Apple ee qalabka iOS, ciyaarta Mashiinnada fudud ee Tinybop loogu talagalay iPhone, iPad iyo iPod taabashada. Tani waa baaritaanno taxane ah oo carruurta iyo dadka waaweyn ay ku baran karaan aasaasiga ah ee injineernimada habka ugu xiisaha badan, ciyaar. Baro dhammaan astaamaha ciyaartaan oo kala soo bixi hoos.
Waa maxay Mashiinnada fudud ee Tinybop loogu talagalay aaladda iOS?
Ciyaarta Mashiinnada fudud ee Tinybop, oo laga heli karo App Store, carruurtu waxay sahamin karaan dhinaca ciyaarista injineernimada. Intaa waxaa u dheer, waxay tijaabin karaan lixda mashiin ee fudud, ogaan karaan sida ay u shaqeeyaan oo ay si buuxda u baaraan waxa ay yihiin xooggyada aan muuqan ee iyaga kaxeeya.
Ciyaartan waxaad ku burburin doontaa qalcad leh libaax laakiin ka taxaddar masduulaagii. Ku abuur miyuusiko qolka ciyaarta oo leh diyaarado u janjeera. U dir satalaytka meel bannaan oo leh xariijooyin leh pulleys. Sare u qaad taangiyada kalluunka weyn adoo adeegsanaya boolal. Ku safro adduunyo cajiib ah giraangiraha iyo faashad. Ku jejebi qolofka barafka muraayadaha indhaha
Carruurtu way beddeli karaan oo tijaabin karaan dhammaan mashiinnada si ay wax uga bartaan fikradaha aasaasiga ah sida xoogga iyo dhaqdhaqaaqa, ficillada iyo fal-celinta, wax soo saarka iyo wax soo saarka, ilaalinta tamarta, faa’iidooyinka farsamada iyo faa’iidooyinka iyo faa’iido darrooyinka mashiin kasta. Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa BILAASH Buugga Mashiinnada fudud, dhammaystir u ah dalabka diiradda saaraya howlaha si loo hubiyo, loo dhiso, loona falanqeeyo mashiinnada fudud.
Astaamaha Mashiinnada Fudud ee Tinybop
Ciyaartan injineeriyada iyo kartida maskaxda ee carruurtu waxay leedahay astaamo xiiso leh oo aan ku muujin karno:
Baro 6-da mashiin ee fudud: levers, pulleys, diyaaradihii foosha xumaa, meerayaasha, giraangiraha iyo faasaska iyo biraha.
Tijaabo leh xisaabinta dhabta ah ee jirka, ficilada iyo falcelinta, wax soo saarka iyo wax soo saarka. Wax ka baro xoogga iyo dhaqdhaqaaqa.
Baadh shuruucda fiisikiska ka dambeeya mashiin walba.
Marka loo eego manhajka sayniska. Xaashiyaha jimicsiga bilaashka ah iyo buugaagta ayaa laga heli karaa websaydhka.
Naqshadeynta codka casriga ah waxay abaal marinaysaa tijaabinta.
Naqshadaha farshaxan ee asalka ah ee James Gilleard.
Hawlaha casriga ahi waxay adeegsadaan kaameeraha qalabkaaga si ay adduunka ugu keenaan caruurtiina.
Buuggan oo ku saabsan waxqabadyada kor loogu qaadayo barashada ayaa lagu soo dejisan karaa bilaash oo waxaa lagu heli karaa 7 luqadood.
Naqshadda dareenka iyo nabadgelyada leh ayaa ku habboon carruurta.
Madadaalada carruurta iyo dadka waaweynba si la mid ah.
Ka soo dejiso Qalabka fudud ee Tinybop ka soo degso App Store-ka
Hadaadan wali haysan ciyaarta waxbarasho ee carruurta iyo dadka waaweyn, waxaad ku rakibi kartaa adiga oo maraya xiriirinta tooska ah ee soo dejinta, kana socota App Store, oo aad ka heli doontid hoosta.
Mashiinnada fudud ee Tinybop ku jira App Store, waxay u baahan tahay macruufka 7.0 ama wixii ka dambeeya. La jaan qaada iPhone, iPad iyo iPod taabashada. Barnaamijkan waxaa loo habeeyay iPhone 5. Waxaa lagu heli karaa luqadaha soo socda: Isbaanish, AfriKaans, Albani, Jarmal, Bengali, Bokmål, Noorwiij, Bulgaariya, Kamboodiya, Catalan, Czech, Shiinaha oo La Fududay, Shiinaha Aasaasiga ah, Kuuriyada, Croatian, Deenish, Slovak, Slovenian, Estonian, Euskera, Filibiin, Finish, Faransiis, Welsh, Griig, Haitian, Cibraan, Hindi, Horaaniyaan, Indooniisiya, Ingiriis, Irish, Icelandic, Talyaani, Jabbaan, Laatiin, Malay, Latin, Farshiish, Polish, Bortuqiis, af Punjabi, romaniyaan, Ruush, Serbiya, Swahili, Iswidish, Tagalog, Thai, Tamil, Telugu, Tibetan, Turkish, Yukreeniyaan, Uyghur, Urdu, Uzbek, Fiyatnaamiis, Carabi.